Lufthansa dia mamerina mandoa ny trosa ara-bola 2021 amin'ny fotoana maharitra
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa dia mamerina mandoa ny trosa ara-bola 2021 amin'ny fotoana maharitra
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Deutsche Lufthansa AG dia mamoaka fatorana amin'ny sandan'ny 1.6 miliara euro
Lufthansa dia niantoka ny famerenam-bola ny trosa rehetra manodidina ny 2.6 miliara euro noho ny 2021
Tamin'ny 30 septambra, ny Vondrona dia nanana vola sy vola mitovy aminy 10.1 miliara euro
Azo inoana fa i Lufthansa dia hisarika singa fanampiny amin'ny fonosana fanamafisana izay tsy ampiasaina ankehitriny
Deutsche Lufthansa AG dia namoaka fifamatorana indray tamin'ny volabe 1.6 miliara euro. Ny fatorana miaraka amin'ny antokom-pinoana 100,000 11 euro dia napetraka tao amin'ny sampana roa niaraka tamin'ny fe-potoana efatra sy fito taona tsirairay avy: Ny tranche izay manana fe-potoana hatramin'ny 2025 febroary 750 dia manana vola 2.875 tapitrisa euro ary manana zanabola 11 isan-taona. Ny tranche miaraka amina fe-potoana hatramin'ny 2028 Febroary 850 dia manana volavola 3.75 tapitrisa euro ary manana zanabola XNUMX isan-taona.
Miorina amin'ny vola maharitra voangona ankehitriny sy amin'ny findramam-bola mitentina 2.1 miliara euro amin'ny tapany faharoa amin'ny taona 2020, i Lufthansa dia niantoka ny famerenam-bola ny trosa rehetra manodidina ny 2.6 miliara euro noho ny 2021. Araka ny nifanarahana nifanarahana nifanarahana tao anatin'ny fepetra fanamafisana ny volana jona lasa teo, ny fanangonana vola fanampiny dia hitarika amin'ny fandoavana ny indram-bolan'ny KWW an'i Lufthansa. Araka izany, ny indram-bola mitentina EUR 1 miliara dia haverina amin'ny KfW mialoha ny fandaharam-potoana. Aorian'ny fandoavana ny vola feno, i Lufthansa dia hanome antoka ny fiaramanidina ho antoka ho an'ny fampindramam-bola KfW eo am-pelatanany.
“Faly be izahay noho ny fanampiana raisinay amin'ny tsenanay. Ny fametrahana fifamatorana mandaitra ankehitriny dia ahafahantsika mamerina ny indram-bola indram-bolan'ny KfW. Ny famerenam-bola aza dia mampihena ny vidim-bola. Na eo aza ny fanonerana, na izany aza, dia azo inoana fa hanintona singa fanampiny amin'ny fonosana fanamafisana izay tsy ampiasaina intsony isika izao. Ny habetsaky ny fampiasana dia miankina amin'ny lalan'ny areti-mandringana, "hoy i Remco Steenbergen, Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG.
Hatramin'ny 30 septambra, ny Vondrona dia nanana vola sy vola mitovy aminy 10.1 miliara euro (ao anatin'izany ny vola tsy voangona avy amin'ireo fonosana fanamafisana any Alemana, Suisse, Austria ary Belzika). Lufthansa dia nanintona teo ambanin'ny 3 lavitrisa euro ny fepetra fanamafisana ny governemanta izay mahatratra hatramin'ny 9 miliara euro amin'ity daty ity. Anisan'ireo vola mbola tsy nidina ny WSF Silent fandraisana anjara I amin'ny vola 4.5 miliara euro, izay hanamafisana ny fananana Lufthansa mifanaraka amin'ny IFRS.